မဟာစကြာဝဠာ ပေါက်ကွဲမှုကြီး - ဝီကီပီးဒီးယား
စကြာဝဠာ ပိုမိုပူပြင်း၊ သိပ်သည်းပြီး လျင်မြန်စွာ ပြန့်ကားသည့် သီအိုရီဆိုင်ရာ အတိတ်ကာလ
ဒြပ်မှောင်များကို လေ့လာခြင်းမပြုမှီ နက္ခတ္တပညာရှင်များသည် စကြာဝဠာ၏ အနာဂါတ်နှစ်ခုအား စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ အကယ်၍ စကြာဝဠာ၏ ထုထည်သိပ်သည်းဆသည် အများဆုံးသိပ်သည်းဆထက်ကြီးမားနေပါက စကြာဝဠာသည် အကြီးမားဆုံး အရွယ်ပမာဏသို့ရောက်ရှိကာ ပြိုကွဲရန် စတင်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် တဖန်ပြန်လည်ကာ ပိုမိုသိပ်သည်း ပိုမိုပူပြင်းလာမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် မဟာထိတိုက်မှု (Big Crunch) ဖြင့် အဆုံးသတ်ပေလိမ့်မည်။ အခြားနည်းလမ်းအရ ထုထည်သိပ်သည်းဆသည် အများဆုံးသိပ်သည်းဆထက် နည်းပါးပါက ပြန့်ကားမှုသည် နှေးကွေးလာမည်ဖြစ်ပြီး ဘယ်တော့မှ ရပ်တန့်တော့မည်မဟုတ်ပေ။ ကြယ်များသည် ကြယ်ဖြူပု (white dwarf)၊ နယူထရွန်ကြယ်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိကုန်ကြပြီး ကြီးသည်ထက်ကြီးလာသော တွင်းနက်များအဖြစ် ကျန်ရှိကာ အပူချိန်သည် ပကတိသုညအခြေနေသို့ ရောက်ရှိပေလိမ့်မည်။ ယင်းအား မဟာအေးခဲမှု (Big Freeze) အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ထို့အပြင် အကယ်၍ ပရိုတွန်များသည် မတည်မငြိမ်ဖြစ်လာပါက ဘာယွန်းနစ်ဒြပ်သည် ပျောက်ကွယ်သွားပေမည်။ ဒြပ်ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုနှင့် တွင်းနက်များသာ ကျန်ရှိပေတော့မည်။ သို့သော်လည်း တွင်းနက်များသည် ဟော့ကင်း ဖြာထွက်မှုအား ပြန်လည်ထုတ်ပေးပါလိမ့်မည်။ စကြာဝဠာ၏ အင်ထရိုပီ (entropy) သည် တိုးပွားလေဖြစ်ကာ ပူပြင်းသောသေမင်းအဖြစ် တွေ့ရပေမည်။ ခေတ်သစ်လေ့လာမှုများအရ မိမိတို့မြင်ရသော စကြာဝဠာသည် ယခုအတိုင်း အရှိန်ဖြင့်ပြန့်ကားနေပါက မိမိတို့၏ ဖြစ်ရပ် မိုးကုတ်စက်ဝိုင်း (event horizon) နောက်တွင် ရောက်ရှိသွားလိမ့်မည်ဖြစ်ကာ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားမည်ဟုဆိုသည်။ မဟာပေါက်ကွဲမှုအား စကြာဝဠာ၏ မူလဟုသတ်မှတ်ချက်အရ ဘာသာရေး အတွေးအခေါ်များနှင့်လည်း ဆက်နွယ်သွားသည်။ အချို့ကမူ မဟာပေါက်ကွဲမှုသည် ဖန်တီးရှင်တို့၏ လုပ်ရပ်ဟု ယုံကြည်ကြလေသည်။
↑ Joseph Silk (2009)။ Horizons of Cosmology။ Templeton Press။ p. 208။
↑ Simon Singh (2005)။ Big Bang: The Origin of the Universe။ Harper Perennial။ p. 560။
↑ Schewe, P. (2005). "An Ocean of Quarks". Physics News Update 728 (1). American Institute of Physics.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မဟာစကြာဝဠာ_ပေါက်ကွဲမှုကြီး&oldid=456512" မှ ရယူရန်
၈ ဧပြီ ၂၀၁၉၊ ၀၆:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၈ ဧပြီ ၂၀၁၉၊ ၀၆:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။